"Waa'een Itoophiyaa kan isaan yaachisu yoo kan isaan miidhu ta'e qofadha' - BBC News Afaan Oromoo
"Waa'een Itoophiyaa kan isaan yaachisu yoo kan isaan miidhu ta'e qofadha'
Labsii yeroo mudamaa mana maree ministirootaatiin labsameen walqabatee, gamtaan Awurooppaa, Jarman, Ingliizii, Nezerlaand fi Ameerikaan yaaddoosaanii ibsuun mootummaan qaama dhimmisaa ilaaluu waliin marii akka taasisuuf waamicha dabarsaniiru.
Embaasiin Ameeriikaa Itoophiyaatti argamuufi dhaabbileen idil-addunyaa ibsa baasaniif ijannoon mootummaa Itoophiyaa maaliidha jechuun dubbi himmaa ministira ajaa alaa Obbo Mallas Alamiin BBCn dubbiseera.
Obbo Mallas deebii kennaniin ''Ijannoon Itoophiyaa komii ummataa xiyyeefannoo keessa galchuudhaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jira. Namoota dahoo seeraa jala turuun itti murtaa'e, kan dhimmi saanii adeemsa irra jiruufi miseensoota paartiilee mormituu dabaltee gadhiiseera. ibsichi waqtii motummaan tarkaanfiiwwan kan biroos fudhataa jiru kanatti kan bahe waan ta'eef miidhaaf ijaaraas miti,'' jedhaniiru.
Ibsichaan walqabatee tarkaanfiiwwan mootummaan Itoophiyaa kana booda jijiruu yoo jiraatees gaafatamanii, ''omitu hinjiraatu, jijirama omaas hinfidu'' jechuun deebiisaniiru.
Yunivarsitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaafi walqunnamtii idil-addunyaa kan ta'an Dr Taafasaa Oliiqaa gama isaanitiin, ibsi kenname kan durii waliin wal hinfakkaatu. Dhiibbaa taasisuuf kan fedhan fakkaata jedhaniiru.
Dhiibbaa kunis attamiin akka ibsamu yoo dubbatanis, ''deegarsawwan gama dinagdeefi dippilomaatii taasifamutiin kan ibsamuudha,'' jedhaniiru.
Biyyi tokko qofaashe dhaabbachu hindanddeesu kan jedhan D Taafasaan ''walitti dhiheenyaafi waliirra fageenya qabnuun nu hubu danda'a jedheen yaada,'' jedhaniiru.
Mootummaan Itoophiyaas labsii yeroo muddamaa kan labsan muddama umameefi muddanaa ta'u mala jechuunis tilamaama isaanii kaa'aniiru. ''Wayita deebiin akkanaa kunis sirrii akka hintaane hubatameettis dhaabbachuu yaaduun yeroosaa gabaabsuun yookiin cirumaa haquun akka danda'amu yaaduun ni danda'u,'' jedhaniiru.
Keessattu Embaasiin Ameerikaa labsicha balaaleffachu isaatiin walqabatee, ''mootummaa Ameerikaas ta'e kan Awurrooppaa kan caalaa cinqu dhimmaa dhunfaasaanii malee dhimma Itoophiyaa keessatti raawwatamu miti. Dhimmi Itoophiyaa kan isaan cinqu yoo bu'aa saanii kan miidhu ta'ee itti dhagahamee qofaadhas,'' jedhaniiru.
Mooyyaleetti namoonni 19 ajjeefaman, 100 ol madaa'an
Eertiraan waggoota sagal booda qoqqobbii jalaa baate
"Mindaan koo xiqqaa waan ta'eef, manni murtii abukaatoo naaf haa dhaabu"
Ministirri Ittisaa Israa'el aangoo gadhiisan
Leegoos hijaaba mana barumsaa keessatti dhowwamee ture kaaste
Tarkaanfii mootummaa federaalaa irratti naannoleen maal jedhu?
Namichi ilmoo leencaa konkolaataatti qabatee deemu qabame